တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အအေးဓာတ် ငွေ့ငွေ့လေး …
This year is colder than last year at here Ma May, but no snow yet. How about your Mom?
အမေက နဂိုထဲက အအေးကြောက်တာဆိုတော့ အအေးဒဏ်တော်တော်ခံနေရတာပေါ့။ အိမ်ထဲမှာတော့ နေလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ပြန်လာမယ်တဲ့။ အခုတော့ Wolverhampton တလှည့် Huddersfield တလှည့် နေနေတယ်ဆိုပဲ။
I have ever metacold weather in Myanmar.At time when I went to Chin state. It was dam cold , could not sleep at night, was afraid of the sun was going down, even the fire could not help me warm.When I faced to fire it was warm on face, chest but the back was cold, then the opposite way the back was warm but the chest was cold.No jumper nor blankets made me warm.I wish I could have run away from that place. Lucky I was, spentafew days and came back to home.
Then I hardly feel cold weather, it has been years that I realized the winter in Myanmar is no longer cold.
In Yangon, we have humid weather, that would have caused warmer.
In the northern or southern hemisphere, the air is very dry, less humid,dry air is cooler.
I saw news on Tele that ice are melting at polar regions, must have been caused by global warming, some said global dimming.It is every one concern about our environment.
It is very lucky that Ma May can feel the fresh air , morning scene...etc...
May be in future.... air on the earth is pollute....water too... every things is polluted by modern industries..... the earth is hotter ....... then at last ...."Impermanence"
what our lord Buddha said are true.....
မမေဓာရေးထားတော့လဲ ဆောင်းတွင်းက ချစ်စရာလေးပဲ။ ဆောင်းတွင်းကို အစက သိပ်မကြိုက်ဘူး။ အသားတွေပပ်တတ်လို့ အေးတာချင်းတူရင် မိုးတွင်းကိုပိုချစ်တယ်။ မိုးရွာရင် အလိုလိုပျော်တယ်။ သစ်ပင်လေးတွေကလည်း စိမ်းလို့ သန့်လို့။ သက်တံ့တွေ ဘာတွေဆိုတာလည်း မိုးတွင်းမှမြင်ရတာလေ။ ကျန်းမာရေးအတွက် သိပ်မကောင်းလို့ မိုးမိမှာ ကြောက်ပေမယ့် အိမ်အပြန်လမ်းမှာဆိုရင်တော့ ထီးကြီးဆောင်းထားပေမယ့် ခိုးခိုးပြီးမိုးစိုခံတယ်။ မိန်းကလေး မိုးရေထဲ ထီးမပါပဲ လမ်းလျှောက်တာကျတော့ မတင့်တယ်ဘူးမဟုတ်လား။ ဘာပဲပြောပြော မိုးရွာတဲ့ဒေသမှာ နေခွင့်ရတာပဲ တော်ပါသေးတယ်။ နှင်းတွေတော့ မြင်ဘူးချင်တယ်။ ကိုင်ကြည့်ချင်တယ်။ အရမ်းကြီး ခေါင်းကိုက်အောင်အေးမယ့် ဆောင်းတွင်းကြီးတော့ မနေချင်ဘူး။
11/23/2006 1:31 AM